Maitiro ekugadzira yakachipa nylon mutsara spare zvikamu zveBosch brushcutters - Ikkaro
kudzidziswa >> Kugadzirisa >> Maitiro ekugadzira yakachipa nylon mutsara mutsinhanisi weBosch mabhureki
Maitiro ekugadzira yakachipa nylon mutsara mutsinhanisi weBosch mabhureki
Izvi hazvisi pachazvo kugadzirisa, asi kubiridzira kushoma kuti titiponese mari. Zvikamu zvekuchengetedza zveBosch zvinodhura zvakanyanya uye mune ino chinyorwa ini ndichakuratidza mashandisiro ekushandisa nylon mutsara kubva kune mamwe mabhureki muBosch emagetsi emabrashi ekucheka.
Ndine chekucheka bhurasho remagetsi Bosch AFS23-37 1000 W yesimba. Zviri kufamba zvakanaka. Ndiri kufara kwazvo nekushandisa kusiri-kusimba senge iyo yandinoda. Iyo yemagetsi bharashi cutter, kwete bhatiri-inofambiswa imwe, inofanirwa kuve yakabatana nemagetsi kuti ishande.
Zvisinei, iyo brand yeiyo nyon spare zvikamu zvinodhura kwazvo, pachinzvimbo chinodhura kwazvo uye inogadzirwa kuitira kuti iwe ugopedzisira watora zvikamu zvaro zvekuzorora. Mune ino kesi, iyo tambo yenylon inouya nerudzi rwebhaudhi iri pakati iyo inodzivirira kuti isapunyuke.
Iwo ari mumufananidzo anouya nemutengo wemuchina € 25 iwo mapakeji e10 mayuniti e30cm ndiko kuti, € 25 yemamita matatu Ipo iwo makoiri anotidhurira € 3 yemakumi matanhatu kana makumi manomwe emamita. Pane musiyano wakawanda.
Ndatenga aya maviri
3mm nylon tambo
Kana iwe uchifarirawo kugona shandisa chero mhando yeiyoni tambo spools Ndinokusiya nzira mbiri.
Shandisa zvakare bhaudhi
Kana isu tichiona maspareti zvikamu zvine diki aruminiyamu bhaudhi. Handina chokwadi kuti chii chingaitika kana isu tikaisa iyo yakatemwa tambo zvakananga. Ndichiona mawaniro ainoita, ndinofunga kuti painobatwa mune imwe huswa inozotsvedza yozobuda mumusoro. Ndosaka tichazoshandisa zvakare mabhaudhi.
Ini ndinosiya vhidhiyo pamwe neshanduko
Kana iwe uchida kuona iyo nhanho nhanho nhanho nemifananidzo, heino unayo.
Tora mamwe maparoti emhino mapapiro, uye bvisa deformation. Saka isu tinogona kuwana yasara yeiyo tambo yataive tasiya
Uye iwe unofanirwa kungocheka iyo nyowani, kuiisa uye kudzvanya zvakare kuti irege kutsvedza.
Tenga musoro wepasirese
Iyi imwe sarudzo yakanaka. Takatenga mumwe musoro wepasirese kana unoenderana nemuchina wedu uye isu tinogona ikozvino kushandisa chero mhando tambo. Aya marudzi emisoro anodhura pakati pe € 5 ne € 15.
Nenzira iyi tinogona kushandura kune chero tambo chero patinoda. Ini ndatenga iyi kunyangwe ndisati ndayedza izvozvi
Pamwe chete nemusoro ndakatenga 3,5mm yakarukwa waya uye ndakaputirawo simbi waya kuti ndione kuti inoshanda sei nekuti ndinofunga ichapfeka zvakati wandei.
Ndiri kutya kuti kuita simbi imwe isingadiwe inokanda, asi pandinoedza ndinokuudza.
Brushcutter yemagetsi yakakosha here?
Uyu ndiwo mubvunzo unobvunzwa nevanhu vazhinji kune wandinoudza kuti ndatenga magetsi.
Ndinoda kupindura izvi nekuti ndicho chinhu chandinobvunzwa kakawanda.
Mhinduro senguva dzose ndeyekuti zvinoenderana. Zvinoenderana nezvaunoda. Ndiri kuishandisa mumunda we2 mafashama, kwandinogona kuisanganisa neyekuwedzera pasina matambudziko. Ndapedza ndinoenda nayo kumba mumota ndokuiisa muwadhiropu. Uye zvinoyemurwa kuti haina kusvibiswa nepeturu nemafuta, kuti haina kunhuwa uye kunyangwe ichiratidzika kunge yakapusa, zvinokosheswa kuti kana iwe uchiishandisa haina kuita ruzha rwakanyanya.
Asi iwe unofanirwa kuziva zvaunotenga, mune ino modhi chaiyo (iyo Bosch ASF 23 - 37) iwe unofanirwa kugara uchisimbisa kuchengetedzeka kwayo kuti ishande uye inova yakaoma. Asi zvimwe zvacho zvakakwana.
Kana iwe uchida muchina une yakajairwa simba, uri kuenda kuushandisa munzvimbo yaunogona kuubatanidza pasina matambudziko uye iwe unoda chimwe chinhu chine ruzha rudiki uye chisinga vadze (kuti usasvibise mota kana kana ndichiichengeta kumba) Zvakanaka, magetsi ndiyo yako yakanyanya kunaka sarudzo.
Kana uchida kuenda nazvo kunzvimbo dzisina magetsi, unoda simba rakawanda, kupfuura 1CV
Hapana chikonzero chekuziva peturu uye mafuta
Inofanira kugara yakabatana uye iwe unorasikirwa nerusununguko
Iwe haugone kuishandisa isina magetsi
Iko hakuna mamodheru ane simba senge mune peturu
Kana iwe uine chero mibvunzo iwe yaunogona kundibvunza ini mumakomenti Uye kana iwe uchida kuti ini ndiwedzere iyi nyaya ndinogona kuita bhurasho rekucheka kutenga gwara.
Nzira yekugadzirisa sei tangi rekuyerera mashandiro ...
Mashandisiro ekushandisa zvekare yekare solar panel uye yekuchaja controller
Categories Kugadzirisa Kubatikiti kufamba
1 taura pa «Maitiro ekugadzira yakachipa nylon tambo inodzivirira zvikamu zveBosch brushcutters»
Nyamavhuvhu 14, 2021 pa10: 53 am
Mhoro: Ndine AFS 23-37 yekucheka bhurasho uye ndinotsvaga chimwe chinhu chinoenderana netambo yekutsiva yandakawana peji rako. Chekutanga pane zvese nekutenda nekugovana mazano ako. Ndingafarire kana iwe ukagadzirisa iyo link yakatungamira kune inoenderana musoro; Zviripachena kuti chigadzirwa hachichawanikwe uye ini handizive kuti chichireva chei. Thanks zvekare.
1 Shandisa zvakare bhaudhi
2 Tenga musoro wepasirese
3 Brushcutter yemagetsi yakakosha here?